Mpanamboatra bandy sy kasety | mpamatsy | China Factory fametahana lamba sy kasety
Ny fehy fametahana tena dia ampiasaina amin'ny famehezana sy fanamafisana ivelany. Ho fanampin'izany, dia azo ampiasain'ny olona manao fanatanjahan-tena izay matetika manao fanatanjahan-tena. Ny vokatra dia azo aforitana manodidina ny tanana, kitrokely ary toerana hafa, izay afaka mitana andraikitra fiarovana.
• Nihatra tamin'ny fanamboarana sy ny fonosana fitsaboana izany;
• Miomana amin'ny kitapo fanampiana tsy nahy sy ratra ady;
• Ampiasaina hiarovana ireo fiofanana, lalao ary fanatanjahantena isan-karazany;
• Fandidiana ny saha, fiarovana ny fiarovana ny asa;
• Fiarovan-tena sy famonjena ny tena ao amin'ny fianakaviana;
• Famonosana ara-pitsaboana biby sy fiarovana ny fanatanjahantena biby;
• Haingo: manana ny fampiasana azy mora ampiasaina izy io, ary loko marevaka dia afaka ampiasaina ho haingon-trano mendrika.
Ny plaster bandage dia vita amin'ny bandy gauze izay miakatra amin'ny pulp, ampio plastika vovoka any Paris hamboarina, aorian'ny fandosirana ao anaty rano, dia afaka manamafy amin'ny fotoana fohy hamaranana ny famolavolana, manana fahaizana modely tena matanjaka, tsara ny fitoniana. Ampiasaina amin'ny fanamboarana fandidiana orthopedic na orthopedic, fanaovana lasitra, fitaovana fanampiana ho an'ny rantsambatana artifisialy, stents fiarovana ho an'ny may, sns, miaraka amin'ny vidiny ambany.